Isiokwu | Onye ọrụ ubi na-elekọta anụ ọhịa | February 2020
Kedu ka esi amata ọdịiche mmanụ aṅụ si na beekeeper anụ ọhịa
Ọbụna onye na-enweghị mmasị na sweets, na-aghọta uru nke mmanụ aṅụ, na-azụrụ onwe ya ite mgbe ụfọdụ iji fanye batrị ya ma meziwanye ahụ ya. Ma, mmadụ ole na ole maara na e nwere ụdị ọzọ nke ngwaahịa a dị ịtụnanya. Ọ bụ maka mmanụ aṅụ aṅụ. Ee, ee, nke a bụ ihe nzacha niile mmadụ niile nwere ịhụnanya.
Njirimara bara uru nke lungfish
Medunitsa - bu otu n'ime osisi ole na ole, ihe bara uru nke ndi ekwenyeghi na ndi oru ogwu. Ma e wezụga nke a, a na-ejikwa medunitsa na-esi nri, nke na-eme ka ọ bụrụ ezigbo mmadụ nke nwere akwa ifuru na ogige. Ngwurugwu nke lungwort na mba anyi iji choputa lungwort na gburugburu ebe obibi di mfe, mana ndi oru ugbo na eme ka ya na ebe ha.
Uzo esi eto oke ohia, iwu nke na-eto eto ma na-elekọta ifuru
Nhazi nke ókèala dị n'akụkụ dacha na-enyekarị maka ịkụ osisi dị iche iche. N'ụzọ dị mwute, ọtụtụ n'ime ha bụ ndị na-ahụ n'anya ma na-akpọnwụ na ndò. Ma gịnị ma ọ bụrụ na ọtụtụ n'ime saịtị ahụ dị kpọmkwem na ndò? Azịza ya dị mfe - akụ a lungwort. Osisi ya ga-adọrọ mma nke ubi ọ bụla, ọ dị mfe iji nlekọta mee ka ị ghara iji oge dị ukwuu na osisi a.
Na-elekọta ebe a na-agba akwụkwọ
Ebe okpomọkụ na-ekpo ọkụ na ndagwurugwu vallota na-acha odo odo juputara na-acha odo odo ga-abụ ihe magburu onwe ya na ụlọ ọ bụla. Osisi ahụ adịghị mma na nlekọta, anaghị achọ ọnọdụ pụrụ iche nke ebe obibi, n'ihi ya, ọ dị mfe na-eto eto n'ụlọ. Nkọwa Vallota, ma ọ bụ dịka a na-akpọ ya "lily ọkụ," bụ ụlọ osisi na-ekpo ọkụ nke osisi amaryllid, bụ nke dị na South Africa.
Otu esi esi nri kabeeji na carrots na Korean maka oyi
Achịcha Korea na-eji nwayọọ nwayọọ na-abanye na tebụl anyị, jiri nwayọọ nwayọọ na-efunahụ ọnọdụ ya. Taa, a na-ahụ tapas na ụlọ ahịa pụrụ iche, na ụlọ ahịa, na ahịa ahịa. Na salads osere bụ nnukwu nri, na nchịkọta ya na poteto ma ọ bụ e ghere eghe ghọọ ụtụtụ nri dị ebube.
Esi emechi uzo red currant compote maka oyi
N'oge oyi, ahụ na-enwe ụkọ vitamin, na iji mejupụta ha, anyị na-enwe obi ụtọ ịmeghe okpomọkụ blanks: compotes, juices, jams, preserves, jellies. Ka ọ dịgodị, na jam, pasent 20 nke ọnụọgụ mbụ nke vitamin C ga-anọgide, mgbe ị na-akwadebe mkpụrụ vaịn na-adịchaghị emetụta okpomọkụ ma chekwaa vitamin ndị dị mma, ma e wezụga nke ahụ, ọ bụ iji kpochapụ ikuku site na ngwaahịa ahụ ma bibie usoro enzyme nke oxidizes vitamin.
Kedu ka esi eji nlezianya kpoo ahịhịa?
Anụ ọhịa na-egbuke egbuke na-egbuke egbuke na-egbukepụ egbukepụ bụ ezigbo nke ọtụtụ ndị nwe ụlọ na ndị na-eme atụmatụ na-agbalịsi ike iru. Otú ọ dị, ọ bụghị onye ọ bụla nwere ike ịnagide "ntutu isi", na ihe kpatara ọdịda na-abụkarị nhọrọ na-ezighi ezi nke ọkụ ọkụ. Atụmatụ nke ọkụ ọkụ nke oge a Usoro iji egbutu ahihia, gụnyere ata, nwere ọtụtụ iche iche, haziri iji rụọ ọrụ na mpaghara dị iche iche.
Dracaena deremskaya: uru bara uru na atụmatụ nke nlekọta ụlọ
Enwere ike iji dracaena eji eme ụlọ na ụlọ ọrụ. Otu n'ime umu azu nke a na-eme nke ọma n'ulo, bu dracaena drama, nke a ma ama maka oke ogwu na ike iji kpoo ikuku n'ime ulo, naputa ya site na toxins na umu ohia.
Ihe owuwe ihe ubi Celery
Taa, a na-ejikarị celery eme ihe ọ bụghị nanị dị ka ihe ọzọ, kama ọ bụ omenala nri. Osisi ahụ nwere ike ime ka ahụ nwee ọtụtụ ihe dị oké ọnụ ahịa, ya na afọ ojuju zuru oke. N'otu oge ahụ, àgwà nke ihe ọkụkụ na-adabere na ntinye nke usoro owuwe ihe ubi na nhọrọ maka oge a kachasị mma.
Celery bụ otu n'ime akwụkwọ nri ndị kacha baa uru, na nlekọta na-adịghị mma. Ọ dị mfe na-etolite n'ụlọ n'ime ite. Otu esi eme ya n'ụzọ ziri ezi, gụọ n'okpuru. Ụdị na nkọwa nke celery E nwere ụdị atọ nke celery: Nkpọrọgwụ - ebe ọ bụ na afọ mbụ nke ịgha mkpụrụ, osisi ahụ na-etolite nnukwu akwukwo nri ihe dị ka 1.5 kilo.
Atụmatụ nke ntụ ọka cumin ojii: uru na nsogbu nye ahụ mmadụ
Mkpụrụ nke cumin cumin na ntụ ọka sitere n'aka ha, bụ nke otu n'ime ihe ndị kacha ochie na ọgwụ ndị dị na ya, na-achọ ma na-emepụta ọgwụ na ọgwụgwọ na ebe niile. Gụkwuo banyere ngwaahịa a multifaceted na-agụ n'ihu na isiokwu ahụ. Nkọwa nke Black Cumin Mkpụrụ Obere mkpụrụ osisi nke ọdịbendị a na-emetuta ihe na-echefu echefu, ha nwere uto ilu ma n'otu oge ahụ nwere ekpomeekpo ose.
Anise na anise kpakpando bu ihe eji esi nri, ogwu na ogwu. Na njirimara nke ngwa nri, oghere, uru na ịjụ ihe eji eme ihe, gụọ n'okpuru ebe a. Nkọwa nke badyan Badyan, bụ otu mkpụrụ nke okooko osisi, ezinụlọ Limonnikovyh. Osisi bụ osisi na-ama osisi, na-eru mita 10 m.
Atụmatụ nke eji celery n'oge ime ime
Celery bụ akụkụ dị mkpa nke nri nri siri ike na nri kwesịrị ekwesị. Otú ọ dị, ọ bụghị ihe nile doro nnọọ anya - uru nke ngwaahịa ahụ n'oge ime dị na ajụjụ. Na ma akwukwo nri bara uru nye ndi di ime, gua n'ihu n'isiokwu. Ihe mejupụtara nke celery Na nri na-eri mgbọrọgwụ na stalks nke celery. Ihe ha na-eme na-agbanwe agbanwe.
Ekele ọkụ ọ bụla n'ebe ọbụla na generator
Ndị na-emepụta mmanụ ụgbọala na-ewu ewu karịsịa na mpaghara na-enweghị ike eletrik. Ọ bụrụ na ụlọ ahụ dịpụrụ adịpụ n'obodo ahụ ma ọ bụ n'ógbè ahụ, enwere ike ịmepụta oge niile, ihe ngwọta ga-eji tankụ mmanụ ụgbọala. Ngwaọrụ ruo ọtụtụ awa na-enyefe ihe na-aga n'ihu ugbu a, ihe bụ isi bụ ịhọrọ nhọrọ kacha mma dabere na mkpa.
Ezigbo ụlọ obibi a na - akpọ diadem Begonia - nkọwa, atụmatụ nlekọta na mmepụta
Bedemia Diadem bụ osisi na-eto eto nke dị ka osisi shrub mara mma nke nwere ihe dị ịtụnanya, nke ụdị a nwere aha ya, n'ihi na ịma mma ya ga-achọ mma ọ bụla n'ime ụlọ ma ọ bụ ogige dị n'ihu. N'isiokwu a, ị ga-amụ banyere ọdịiche dị iche iche dịgasị iche iche na ụdị begonias ndị ọzọ.
Kedu ka esi eto odo odo begonia ma nye ya nlekọta kwesịrị ekwesị n'ụlọ? Foto na nkọwa nke iche
Begonias dị n'ọtụtụ dị otú ahụ nke ọbụna ndị na-eto eto nwere ahụmahụ na-enwekarị mgbagwoju anya na echiche. Isiokwu ahụ ga-atụle begonias odo. Anyị kwadebere ozi na okooko osisi ndị a, otu esi elekọta ha, ọtụtụ, ihe nuances na ụzọ aghụghọ ndị bara uru maka onye na-ahụ ụlọ n'ime ụlọ.
Ntuziaka na ndụmọdụ ndị bara uru maka ịkọ ubi gardenia sitere na mkpụrụ n'ụlọ
Gardenia bụ ụlọ osisi nke na-enweghị ezigbo aha maka na-eto eto n'ụlọ. Ụzọ kachasị mkpa maka ubi gardenia bụ mkpụrụ na grafting. Ozugbo o kwesiri iburu n'uche na n'ulo n 'uzo usoro uzo di ihe nadighi. Usoro nke ịzụ mkpụrụ osisi gardenia siri nnọọ ike, n'ihi na osisi a nwere ọdịdị dị egwu.
Otutu ụdị pink gerbera: osisi mara mma maka ebe gi!
Pink gerbera - mara mma ifuru ifuru. N'ụzọ bụ isi, ọ na-etolite maka ịkụnye nri na ndokwa nke ifuru. Ọtụtụ ewu ewu n'etiti ndị na-ese onyinyo na ndị na-emepụta ihe. Nke a na-acha ọcha pink agba anya dị ukwuu n'ụlọ na windill, na ogige ubi plots na dị ka mmewere nke ihe ndozi na imewe.
Ọrụ ebube - swamp hibiscus
Ndị na-eto eto na-ahụ maka hibiscus marsh maka ihe ndị a chọrọ mma. A na-eto osisi shrub a dị ka ogige ma ọ bụ ụlọ ime ụlọ. Na ala na-emeghe, ihe nrịbama ahụ dị egwu na nnukwu. Akụkụ a ga-agwa gị ihe hibiscus bụ marsh, nke chọrọ ìhè, mmiri, ala, ala maka ịgha mkpụrụ na okooko osisi.
Ntuzi ndi ozo maka whitefly. Kedu otu esi akwadebe ngwọta na usoro osisi?
N'ụzọ dị mwute, ihu igwe na-ekpo ọkụ na mmiri ozuzo na-eme ka ọ bụghị naanị na-eto eto. A na-arụ ọrụ pests ndị ọzọ, karịsịa whitefly. E nwere ụzọ dị iche iche a ga-esi na-emeso ya, ma ha adịghị enyere aka mgbe niile, mgbe ahụ, ọgwụ ndị na-enyere aka - ụmụ ahụhụ. Ọzọ, gwa gị ụdị ahụhụ, nsogbu dị na ya.